VaJoe Biden Vadoma Madzimai Maviri Kuti Vave Vamwe Vakuru Vakuru veMauto muAmerica
VaJoe Biden vachitaura pazuva rekucherechedza vanhukadzi, re International Women's Day
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vadoma madzimai maviri emumauto kuti vakwiridzirwe kusvika pakupiwa nyembe dze Four Star.
Madzimai aya aifanirwa kunge akakwiridzirwa pabasa ravo mazuva ehutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, asi vakuru mumauto vakambomisa kuvakwiridzira pabasa vachitya kuti VaTrump vaigona kuvakanganisa kana kuramba kuti vakwiridzirwe pabasa.
Air Force Gen. Jacqueline Van Ovost na Army Lt. Gen. Laura Richardson vachapiwa nyembe dzekuva vakuru vanopfeka nyembe dze Four Stars mumauto eAmerica.
Pari zvino, Amai Van Ovost vari kutungamira bazi remauto rinoona nezvekufamba kwemauto nezvombo zvavo, kana kuti U.S. Transport Command, ukuwo Amai Van Ovost vachitungamira bazi remauto ku chamhembe kwe America, kana kuti U.S. Southern Command mudunhu re Florida.
Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Muzvinafundo Chipo Dendere, vanoti madzimai maviri aya vanhu vanoziva basa ravo zvikuru, vachiti pakati pavo vane makore anopfuura makumi manomwe eruzivo rwebasa ravo.
Muzvinafundo Dendere vanoti vanorumbidza zvikuru VaBiden nekuti vakwiridzira madzimai aya pazuva iro nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva remadzimai, kana kuti International Women’s day.